Filtrer les éléments par date : samedi, 02 janvier 2021
samedi, 02 janvier 2021 19:33
Izay mamboly no mihoty
Sarotra be ve ny manakatra hoe, rehefa tsy mamboly, na tsy mamokatra ianao dia tsy mihoty sy tsy mihinana?
Ny Firenena tsy mamokatra izany, dia aza manantena ny hihoty sy hihinana, fa any lalana dia ny mangataka sy mitrosa.
samedi, 02 janvier 2021 19:26
Toetr’andro : Misy andro ratsy roa niforona ao atsinanan’i Madagasikara
Misy andro ratsy roa niforona ao amin’ny Ranomasimbe Indiana. Ny voalohany dia nahazo anarana hoe « DANILO ». Any amin’ny 2350 km avaratra atsinanan’Antalaha no misy ny foibeny ny tolakandro teo. Tsy hikisaka firy izy io.
Ny faharoa, izay andalam-piforonana, dia any amin’ny 2900 km atsinanan’Antalaha.
Mifandray mivantana ny fivoaran’izy ireto, ka ilay rivodoza voalohany no tombanana hivoatra maharitra.
Tsy hisy fiantraikany amin’ny toetry ny andro eto Madagasikara ireto andro ratsy ireto ato anatin’ny 7 andro manaraka, araka ny vinavinan’ny sampana mpamantatra ny toetr’andro, izay manaraka akaiky ny fivoaran’ireo andro ratsy ireo.
samedi, 02 janvier 2021 19:25
Covid-19 : Nisy tranga vaovao 53, ka eto Analamanga ny 20 amin’ireo
Olona iray avy eto Analamanga no namoy ny ainy teo anelanean’ny 28 Desambra hatramin'ny 1 Janoary 2020 raha ny antontan'isa vaovao mikasika ny Covid-19 eto Madagasikara.
53 ny tranga vaovao ka avy eto Analamanga ny 20, any Matsiatra Ambony ny 10, avy any Boeny ny 8. Nahitana tranga 4 avy tany Vakinankaratra sy Amoron'i Mania, 3 avy tany Vatovavy Fitovinany sy DIANA. Tranga 1 kosa tany Menabe.
Tafakatra 17 767 hatreto ny isan'ny olona voamarina fa nidiran'ny valan'aretina teto Madagasikara ; efa sitrana ny 17 298 tamin’ireo raha toa ka mbola manaraka fitsaboana ny 207.
Raha nampiasaina nampakaran-drano tamin'ny reniranon'i Nil tany Ejipta taon-jato faharoa talohan'i Jesoa Kristy ny Vis d'Archimède, amin'ny alalan'ny Vis sans fin, dia nampifamadihana fotsiny izany, ka ny rano mandeha midina, na kely aza ny haavony sy ny habetsahan'ny rano entiny, dia mahavita mampiodina ilay vis, izay izy indray no manodina générateur na alternateur, dia afaka mamokatra herinaratra.
Tsy mamono ny trondro mandeha amin'ilay lakan-drano izy, satria miodina mora ka afaka ny trondro, tsy mila fotodrafitrasa goavana izy.
Ireo Japoney aza dia efa nanamboatra Vis hydroélectrique portatif, milanja 18kg fotsiny, ka azo afindrafindra.
Maro ireo tata-drano maloto any an-toerana no nasiana vis hydroélectrique mampirehitra ireo andrin-jiro amin'ny alina.
Nitrangana haintrano goavana aty an-drenivohitry ny distrika Antanifotsy, faritra Vakinankaratra ny 1 janoary 2021. Nirehitra ny tranobe kilasimandrin'ny sekoly katolika aty an-toerana.
Tany amin'ny rihana ambony no niandoha ny afo. "Court-circuit" na fatana nirehitra hadino no tombanana ho niavian'ny afo.
Nalaky niitatra ny afo, saika vita amin'ny hazo rahateo koa ny ao anatin'ny trano.
Zara raha nisy entana avotra noho ny herin'ny afo.
Naharitra adim-pamantaranandro telo mahery vao lefy ny afo.